Asi rwendo rwaVaMugabe urwu rwuri kukonzera mitauro munyika vanhu vakawanda vachiti VaMugabe vari kushandisa mari yehurumende zvisina musoro panguva iyo nyika iri kutatarika. Vanoziva zviri kuitika vanoti rwendo urwu rwuchadya mari inodarika mamiriyoni gumi emadhora.
Vanoziwa zviri kuitika vanoti VaMugabe vari kuenda kuNew York nevanhu vanodarika makumi manomwe, avo vanosanganisira mudzimai wavo, Amai Grace Mugabe, vana vavo, Amai Bona Chikore, Chatunga Bellermine, Russell Goreraza, mukuwashawa wavo, Simba Chikore, pamwe nemakurukota nevamwe vakuru vakuru muhurumende.
Mamwe makurukota nevamwe vakuru muhurumende vanonzi vatove muNew York, kuitira kuti vazotambira VaMugabe pavanosvika panhandare muguta iri nemusi weSvondo.
Vanhu vakawanda vataura neStudio7 vatsanangura VaMugabe semunhu ane humbimbindoga uye anoda kuguta iye nemhuri yake nyika yose ichiyaura nenhamo.
Mumwe anorwira kodzero dzevanhu, uye ari mumwe wechidiki muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, VaTerry Mutsvanga, vati VaMugabe vave kuita nyika sekambani yavo.
Vatiwo vana vaVaMugabe vaifanirwa kunyimwa magwaro ekupinda mu America nekuti havasi kunoita basa rehurumende.
Munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzi muzvikoro zvepamusoro, Va Makomborero Haruzivishe, vanoti mari iri kutambiswa naVaMugabe yaikwanisa kubatsira vadzidzi vakawanda nemari yedzidzo pamwe nekutenga mishonga yemuzvipatara.
Mumwe mugari wemuHarare, VaEdgar Gweshe, vanotiwo kuita kwaVaMugabe kunozvidza nyika, uye kunoburitsa makaro ane nemhuri yavo panguva iyo nyika yese iri kuchema.
Mutauriri weMulti Radicial Christian Democrats, VaSebastian Mubvumbi, vanoti vatungamiri havafaniri kuita zvinhu zvakadai zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi.
Vanoongorora nyaya dzehupfumi, VaMasimba Kuchera, vatiwo vashamiswa nekuita kwaVaMugabe, vachitiwo bhanga guru rinofanira kutsanangura kuti mari yakawanda kudai yakabvepi iyo nyika isina mari.
Mashoko aya atsinhirwa naVaMasimba Manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari. Vatiwo nemamiriri akaita zvinhu, VaMugabe vaifanira kuenda nevanhu vashomanana senzira yekuchengetedza mari.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaChris Mushowe, kuti tinzwe kuti sei VaMugabe vari kuita izvi.
Vazhinji vati zviri pachena mhuri yaVaMugabe inenge ichitenga zvinonaka nekudya mari yevanhu veZimbabwe apo ivo vanenge vari kumusangano weUN.
Musangano wepagore weUNGA unoitwa gore rega rega muna Gunyana, uye VaMugabe nevamwe vavo vakatemerwa zvirango neAmerica, vanobvumidzwa kuenda kumusangano uyu, asi havabvumirwe kubuda muNew York sezvo vachibvumidzwa chete kunge vari munharaunda isingapfuure makiromita makumi mana.